Raad Raac News Online – (Dhageyso ) Cali Khaliif Galeydh oo ka hadlay Dagaalo ka socda Dulleedka Laascaanood.
(Dhageyso ) Cali Khaliif Galeydh oo ka hadlay Dagaalo ka socda Dulleedka Laascaanood.
Moos Bukeeni April 12, 2017 Comments Off on (Dhageyso ) Cali Khaliif Galeydh oo ka hadlay Dagaalo ka socda Dulleedka Laascaanood.
Madaxweynaha Maamulka Khaatumo Mudane Cali Khaliif Galeydh ayaa markii ugu horeysay si toos ah uga hadlay Dagaalo ka soconaya Degaano ka Mid ah kuwa hoostaga Magaalada Laascaanood ee Gobalka Sool.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay Dagaalada u dhaxeeya Beelaha Walaalaha ah ee halkaasi ku dhaqan isagoo ugu baaqay in ay joojiyaan Xiisadda u dhaxeysa labada dhinac.
Sidoo kale Madaxweynaha Maamulka Khaatumo ayaa ugu baaqay Maamulada Puntland iyo Somaliland in ay kala dhaxgallaan beelahan is haya Madaama gobalka Sool ay labadoodu ka wada Aramiyaan.
Odayaasha labada dhinac ayuu Ugu baaqay in ay kala dhaxgalayaan Maleeshiyo beeleedyada isku haya degaanka Dabataag oo ka mid ah Degaanada hoostaga Magaalada Laascaanood halkaasoo uu Dagaalka ka soconayo.
Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli xiisad u dhaxeysay beelo wallaala ah ay ka taagan tahay degaano ka mid ah Gobalka sool iyadoo dagaalkii ugu dambeeyay ee Labada dhinac halkaasi ku dhex maray uu sababay Qasaare dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalka u dhaxeeya Beelaha Wallaalaha ah ee halkasi ku dhaqan ayaa waxaa uu salka ku hayaa muran ku saleysan dhul daaqsimeed ceelbiyood kuwaasi oo markii dambe isku badalay Aargoosi iyo Aanooyin Qabiil.